Ogaden News Agency (ONA) – OYSU Dhagaxlay oo ka qayb galay shir ay SMF soo abaabuleen
OYSU Dhagaxlay oo ka qayb galay shir ay SMF soo abaabuleen
Hay’ada dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee magaceeda loo soo gaabiyo MSF ayaa xaflad balaadhan oo ay ku xusayeen maalinta maskaxda ama dhimirka aduunka ku qabatay xerada Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab. Xafladan oo aad u balaadhnayd aadna loo soo agaasimay ayay hay’ada MSF ku marti qaaday dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada Dhagaxlay kudhaqan iyo hay’adaha ka howl gala xerada iyo waliba ururada kala duwan ee xerada kadhisan.
Hay’ada dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF ayaa sirasmi ah xaflada ugu csuuntay OYSU Dhagaxlay oo kamid ah ururada ka dhisan xerada islamarkaana ah urur aad ooga muuqda deegaanka Dhadhaab.
Xafladan oo ahayd mid ururkasta ama qol kasta ay soo bandhigayeen waxyaabo kala duwan, ayay waxay OYSU Dhagaxlay kusoo bandhigeen barnaamij cajiib ah oo hay’ada MSF iyo dadwaynihii kalaba ay aad oola dhaceen.
OYSU Dhagaxlay ayaa soo bandhigay Dhaanto iyo Riwaayad ay soo diyaariyeen kooxda Hilaac ee xidigaha OYSU Dhagaxlay. Riwaayada iyo dhaantada uu ururka OYSU/Dhagaxley soo bandhigay ayaa noqday hawshii ugu wanaagsanaa ee dadku isu wada taageen ee lagu soo bandhigay madashay ay munaasabadu ka dhacaysay.
Agaasimihii xaflada oo ahaa nin ajnabi ah oo u dhashay wadanka Kenya ayaa ku dhawaaqay qolada koobka qaaday oo nqotay OYSU Dhagaxlay wuxuuna sigaar ah uxusay hawsha wanaagsan ee ay qabteen Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenia wuxuuna sawiro gaar ah ka qaatay kooxdii OYSU.
Guntii iyo gabagabadii dadwaynihii madasha fadhiyay ayaa maanta ku haasaawayay OYSU iyo wacdarihii ay muujiyeen waxayna qolo kasta oo madasha fadhiday qoratay magaca OYSU.